Wondershare IPhone Nyefee: Nyefee music, videos, photos
Wondershare IPhone Nyefee bụ oké aka ngwá ọrụ n'ihi na ị na mmekọrịta gị na iPhone ọdịnaya gị kọmputa. Na ya, i nwere ike mbupụ gị iPhone songs, videos, weghaara photos, listi ọkpụkpọ, akwụkwọ ọdịyo, na ndị ọzọ ka gị na kọmputa mmuo. Ọ ga-tụnyere music gị iPhone na iTunes Library, naanị idetuo iTunes kọrọ faịlụ gị iTunes Library. Na site na iji ya, na ị na-enwe ike mbubata songs, videos, foto, na listi ọkpụkpọ, site na kọmputa gị ka gị na iPhone enweghị syncing gị iTunes Library. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma iPhone music transfer ngwá ọrụ. Wondershare IPhoneTransfer software ugbu a na-akwado ndị ọhụrụ iOS 8 n'ụzọ zuru ezu. Ọ na-eme importing na exporting faịlụ n'etiti gị iPhone na kọmputa nnọọ mfe ma dị mfe. Ebe a bụkwa a ndu mee ka gị na iPhone data nyefee ndị kasị dịrị nchebe, nke na-achọ 3 nzọụkwụ. Lelee ha si.
Wondershare IPhone Nyefee
Import faịlụ ọ bụla na kọmputa ọ bụla iPhone enweghị ikpochapụ ndị iPhone;
Detuo faịlụ site na kọmputa gị iPhone;
Ndabere music si iPhone kọmputa na Fim, artwork, na play adabere.
Mmekọrịta iPhone music ka iTunes Library seamlessly;
Ịmepụta na dezie foto albums jikwaa oyiyi na iPhones;
Export smart listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes Library na kọmputa;
Ndabere iPhone captures foto na vidiyo na kọmputa;
Ofụri Esịt-akwado ndị ọhụrụ iOS 9/8 na otutu Apple ngwaọrụ;
Ndị ọzọ 9 iPhone Nyefee
A mfe ma dị irè ngwa n'ihi nzube nke nyefe nke faịlụ site na otu ebe ruo ebe ọzọ. Ọ na-nachi ios ngwaọrụ nnọọ mfe na n'ụzọ dị mma karịa itunes. Syncios bụ ụzọ iji mfe transfer na nzukọ nke iphone, iPod na ipad data ọ bụla na PC.
CopyTrans égwu (Windows)
A ngwaahịa nke CopyTrans, CopyTrans égwu bụ ihe dị mfe ngwọta effortlessly-eje ozi ọtụtụ ọrụ dị ka Ichekwa ndabere na Iweghachi iPhone ngwa ọdịnala, ntọala na akwụkwọ. Na ojiji nke CopyTrans égwu ị pụrụ ọbụna tinye akwụkwọ ngwa ọdịnala na nyefee iPhone egwu na scores na ọganihu ọ bụla na ngwaọrụ. The isi nke CopyTrans égwu bụ na zuru ezu usoro nke echichi nke iOS ngwa ọdịnala na iPhone na iPad na CopyTrans égwu-ewe nanị abụọ clicks na ọbụna adịghị achọ iTunes.
The ọtụtụ ọrụ nke CopyTrans égwu nwere ike ịbụ ka ndị a:
Echichi nke ngwa ọdịnala na ọ bụla iPhone
Echichi nke ngwa ọdịnala na ọ bụla iphone bụ ihe dị mfe ọrụ na-eme na CopyTrans égwu. Ọ bụ nnọọ dị ka a dị mfe Dọrọ na dobe ọrụ. Ọbụna Ihichapụ nke ọ bụla ngwa ọdịnala na otu ma ọ bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ bụ na-ebu ọnụ na mfe na-eme na CopyTrans égwu.
-Ewere dị ka otu n'ime ndị kasị kacha na nile na otu ios ọdịnaya management usoro nke na-enye nnukwu achịkwa niile stof. Ọbụna, ọ na-atụle na AnyTrans na-eche banyere Music na listi ọkpụkpọ ọbụna karịa itunes na-eme.
iExplorer Jikọọ (Mac)
iExplorer Jikọọ bụ nnọọ ọzọ ngwa n'ihi nzube nke Windows na Mac. Ihe kasị mma banyere nke a na-eji ngwa bụ na ọ na-achọ ọ oru ihe ọmụma iji ya. Ọ enuba media na ígwé ojii mwekota na-enye ohere ohere nke ọ bụla ndekọ na windo ma ọ bụ Mac.
Ekwentị Trans, dị nnọọ ọzọ ngwa n'ihi nzube nke ezigbo free iPhone music transfer! -Ewere dị ka ndị kasị mma iphone music transfer, ngwa bụ a otu n'ime ndị kacha iji na eziokwu ga-atụle dị ka nanị na-eje ije na gị backyard. Ekwentị Trans bụ ukwuu na-enye aka n'ihi nzube nke na-ebufe music, photos, ngwa, fim, egwú videos, TV na-egosi, pọdkastị, ụdaolu, eBooks maka Free!
Na PhoneTrans dị n'ihi na ma nyiwe Windows na Mac, ngwa bụ kpam kpam free na ọma wuru ngwa n'ihi na iPhone music nyefe. Ọ na-eje ozi nzube nke 100% Free Nyefee Media faịlụ ka / site na PC na Mac dị ka exporting music si iphone, iPad na iPod na kọmputa, na Anglịkan ọbụna na-enweghị mkpa nke itunes. Ọ na-eje ozi nzube nke nyefe nke fim, ụdaolu, ọtụtụ media faịlụ na ngwa site na ngwaọrụ. Na PhoneTrans-ewere dị ka otu nkwụsị ngwọta maka niile mkpa, Phonetrans-ewere dị ka n'etiti ndị kasị mma n'ihi na iphone music transfer na ndị ọzọ na nzube.
Ihe ngwa-ewere dị ka a dịghị brainer, n'ihi nzube nke na-ebufe nke faịlụ site na iDevices ka itunes na PC. iSkysoft TunesOver ekpuchi akụkụ dị iche iche dị ka Copy Music, Videos na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka iTunes na gị PC si iDevice, ịkekọrịta Music Anakọtara-enweghị mkpa nke iTune. Nyefee Media faịlụ site PC / iTunes ka iDevice na-ebuli Formats na-enwe gị Media Files na Mepụta Backups nke ha na PC / iTunes bụ ụfọdụ n'ime ndị ọzọ ọrụ, nke iSkysoft TunesOver ekpuchi.
Zapya bụ nnọọ ngwá ọrụ ọzọ maka ngwa ngwa cross-ikpo okwu faịlụ transfer & òkè. Ọ na-atụle dị ka otu n'ime coolest nkekọrịta ngwá ọrụ n'ụwa nile. Zapya bụ Free na Self-ẹdude Ịkekọrịta Network. Ihe kasị mma banyere Zapya bụ ikike nyefee faịlụ na-enweghị Mobile Data Network ma ọ bụ wifi njikọ. Ọ dịghị data ojiji! Ọ dịghị internet mkpa!
Fotolr, a dị ike ngwa bụ nke genre nke foto nhazi App nke nwere ọtụtụ ndị dị ike na bara uru ọrụ. The ise bụ isi na ọrụ nke Fotolr bụ Foto dị edezi, Image mmetụta, makeover, Album ọrụ na foto nkekọrịta.
Mfe Nyefee (APP)
Mfe Nyefee bụ nnọọ ọzọ otu nke kasị mma iPad na iPhone foto transfer ngwa, nke bụ n'ọtụtụ ebe na-ewu ewu n'etiti ndị mmadụ n'ụwa nile. Ewu ewu na nke ngwa nwere ike ikpe site eziokwu ndị dị mfe Nyefee App e ebudatara karịrị otu nde ugboro. Na Mfe Nyefee ọ na-aghọ nnọọ mfe idetuo foto site na iPad na iPhone gị na kọmputa. Ọ na-echebe Meta-data nke photos. Na Mfe Nyefee niile foto albums na vidiyo na kọmputa nwere ike zigara gị iPad na iPhone site Wi-Fi. Ọ na-enye nchebe usoro ma si otú i nwere ike melite a ngafe koodu iji nweta ya. Ihe pụtara ìhè nke ngwa bụ na ọ na-amanye dịghị ịgba na foto kpọfere size, i nwere ikike zuru ezu nyefe usoro. Ọ na-arụ ọrụ na niile arụ ọrụ usoro gụnyere windows na Linux. Otú ọ dị maka mbụ 50 photos, ngwa bụ free, ma na-achọ ndị ọzọ ego ga-akwụ ụgwọ karịrị ya.
Na-ekiri ndị Video maka Wondershare iPhone Nyefee
Top 10 Best Alternatives ka iTunes
Export listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes
Nyefee na Ndi ana-akpo si iPhone ka Gmail
Import Gmail Ndi ana-akpo ka iPhone
Ibufee ọdịnaya site na iPhone ka Mac
Gịnị bụ Best iPhone égwu
Nyefee SMS si Blackberry ka iPhone
Ọdịiche dị n'etiti ndị Android na iPhone
> Resource> iPhone> Wondershare iPhone Nyefee: na Best iPhone nnyemaaka